» बिजुलीमाया वनः श्रेष्ठ राष्ट्रिय संगीत पुरस्कार ल्याल्मोलाई, को हुन् ग्याल्मो ?
बिजुलीमाया वनः श्रेष्ठ राष्ट्रिय संगीत पुरस्कार ल्याल्मोलाई, को हुन् ग्याल्मो ?
१५ पुष २०७७, बुधबार २०:४८
हेटौंडा – एकलाख धनराशीको बिजुलीमाया वनः श्रेष्ठ राष्ट्रिय संगीत पुरस्कारबाट भारत दार्जलिङ्ग निवासी गायिका दावा ग्याल्मो ( उपमा योञ्जन) लाई सम्मान गरिने भएको छ । भीम विराग संगीत, साहित्य, कला प्रतिष्ठान नेपालले प्रदान गर्दै आएको एकलाख राशीको बिजुलीमाया वनः श्रेष्ठ राष्ट्रिय संगीत पुरस्कार यसवर्ष ल्याल्मोलाई प्रदान गर्ने भएको हो ।
बुधबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी माघ १७ गते भारत दार्जलिङ्ग निवासी गायिका ग्याल्मोलाई उक्त पुरस्कारबाट सम्मानित गर्ने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हयग्रीव आचार्यले बताए । वरिष्ठ संगीतसाधक, कवि एंव गीतकार भीम विराग जन्मजयन्तीको अवसरमा प्रतिष्ठानले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्दै आइरहेको छ ।
प्रतिष्ठानले पहिलोपटक रु २० हजार राशिको भीम विराग संङ्गित युवा पुरस्कार २०७७ दक्षिण एसियाको पहिलो महिलाहरुको सांङ्गितिक समुह हार्मोनी महिला गायन समुह पोखरालाई प्रदान गरिने जनाएको छ । बिजुलीमाया वनः श्रेष्ठ राष्ट्रिय संगीत पुरस्कार २०६४ देखि हेटौंडाका कुशल ब्यवसायी, समाजसेवी कन्हैयाकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नी ममतामयी माताको नामबाट पुरस्कार स्थापना गरेका थिए । प्रतिष्ठानले हालसम्म ११ जना श्रष्टालाई पुरस्कार सहित सम्मान गरेको छ ।
बिक्रम संवत् २०६४ सालमा नेपाली संगीतिक फाँटका सुप्रसिद्ध संगीतकार अमर गुरुङ, २०६५ सालमा प्रसिद्ध नेपाली गायक प्रेमध्वज प्रधान, २०६६ सालमा नेपाली गीतसङ्गीत जगतका अनन्त तारा तथा भजन शिरोमणिका उपनामले चिनिने भक्तराज आचार्य, २०६७ सालमा नेपाली गीतसंगीतका आधुनिक गायक तथा संगीतकार फत्तेमान राजभण्डारी, २०६८ सालमा प्रसिद्ध गायिका र नेपाली फिल्मकी पहिलो महिला संगीतकार शान्ति ठटाललाई सम्मानसहित पुरस्कार वितरण गरिएको थियो ।
त्यस्तै २०६९ सालमा आधुनिक नेपाली गायक प्रकाश श्रेष्ठ, २०७० सालमा वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार दीप श्रेष्ठ, २०७१ सालमा वरिष्ठ लोकवादक न्हुच्छेबहादुर डंगोल, २०७२ सालमा प्रसिद्ध गायिका तथा संगीतकार मीरा राणा, २०७३ सालमा दार्जिलिङका नेपाली संगीतकार कर्म योञ्जन र २०७४ सालमा कवि, गीतकार, उपन्यासकार एवं चलचित्रकर्मी चेतन कार्कीलाई सम्मानसहित पुरस्कार प्रदान गरेको थियो ।
को हुन् दावा ग्याल्मो ?
दावा ग्याल्मो अर्थात् उपमा योञ्जन । दार्जिलिङका त्रिदेवी (नेपाली सांगीतक क्षेत्र) का रुपमा परिचित अरुणा लामा, शान्ति ठटाल र दिलमाया खाती, पछिको उम्दा स्वरकी धनी ग्याल्मोलाई अरुणा लामापछि ‘दर्द’ भरिएका गीतरुलाई सहज–सरल रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमताकी गायिकाको रुपमा लिइन्छ । उनी अहिले ६५ बर्षको पुगिन् । उनको जन्म सन् १९५६ मा भारतको दार्जिलिङ्मा भएको हो ।
दार्जिलिङको सिंमाडीमा नेपाली परिवेशमा हुर्कीबढेकी ग्याल्मो १४ वर्ष उमेर काठमाडौं आएकी थिइन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रको राज्यभिषेक (सन् १९७५, फेब्रुअरी) सहभागी हुन दार्जिलिङको टोलीसँगै उनी पहिलोपटक काठमाडौं आएकी थिइन । त्यतीबेला उनले रेडियो नेपालमा दुई वटा गीत रेकडिङ्ग गर्ने मौका पाएकी थिइन् । ‘रात गहिरिँदै जान्छ कल्पनाको सागरमा’ र ‘जिन्दगीका मायाहरु’। दुवै गीतका संगीतकार थिए, वसन्त क्षत्री र गीतकार तेजेन्द्र गुरुङ । त्यसवेला रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र गीत रेकर्ड गराउन पाइन्थ्यो ।
ग्याल्मोले १५ बर्षकै उमेरमा नेपालका स्वरसम्राट नारायण गोपाल र गायक तथा संगीतकार गोपाल योञ्जनका बीचमा बसेर गाउने मौका पाइन् । उनको स्वरको क्षमता नारायणगोपाल र गोपाल योञ्जनले पनि चिनेका थिए । त्यसले नै उनको भावी पहिचानको रेखा को¥यो । ग्याल्मोलाई नारायणगोपाल–गोपाल योञ्जनसहित नेपाली संगीतमा सक्रिय रहेको त्यो समय स्वर्णयुग थियो । त्यतिवेला दावाको नाम केटाको जस्तो भन्नेहरु धेरै थिए । योञ्जनले दावा नाम उपमा योञ्जन राखिदिएका थिए । योञ्जनले दिएको उपमा योञ्जन नाम अहिले पनि आफ्ना लागि सर्वप्रिय सम्मान गर्छिन् । ग्याल्मोको विवाह सन् १९७९ मा भएको थियो । विवाह भएसँगै उनी हङकङ गइन् ।
मकवानपुरको विकट बाह्रबिसे गाउँमा पहिलोपटक सडक पुग्यो
मकवानपुरका विकको रहस्यमय मृत्यु घटनाको छानबिन गर्न माग
हेटौंडामा बसको ठक्करबाट एक जना घाइते